चुरोटजत्तिकै हानिकारक हुन्छ चिनी – Nepal Online Khabar
असार १७, २०७८ बिहिबार 449
स्थ्यसँग जोडिएका धेरै कुरा तपाई जान्नुहुन्छ, पढ्नुहुन्छ, महशुस गर्नुहुन्छ र केही तरिका तपाई प्रयोगमा पनि ल्याउनुहुन्छ । स्वास्थ्यसँग जोडिएका केही कुरा यस्ता पनि हुन्छन्, जसबारे तपाईलाई थाहा हुँदैन । तर थाहा हुनु जरुरी हुन्छ ।
किनकी यसले तपाईको स्वास्थ्यमा असर पारिरहेको हुन्छ । जस्तै चिनीको प्रयोग ।के तपाईलाई थाहा छ ? चिनी तपाईको स्वास्थ्यका लागि उत्तिकै हानिकारक छ, जति चुरोट र रक्सी हुन्छ ।
दैनिकजसो कुनै न कुनै रुपमा तपाई हामीले चिनी सेवन गरिरहेका हुन्छौं । क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयले गरेको एक अनुसन्धानबाट यो पत्ता लागेको छ कि अधिक चिनीको सेवन स्वास्थ्यका लागि रक्सी र चुरोट सेवन जत्तिकै हानिकारक हुन्छ ।
गुलियोले खराब कोलेस्ट्रोल बढाउँछ, रक्त धमनीलाई साँघुरो बनाइदिन्छ, ब्लड ग्लुकोज र इन्सुलिनलाई बढाइदिन्छ र समग्रमा तपाईंमा अनावश्यक मोटोपन ल्याइदिन्छ । त्यसले मुटु रोग र मधुमेहको उच्च जोखिम निम्त्याउँछ ।
दिमागलाई कुलततर्फ धकेल्छ
तपाईं चुरोट, मदिरा पिउनुहुन्न र जीवनभर त्यस्तै भएर बाँच्न चाहनुहुन्छ भने अत्यधिक गुलिया चिजहरुबाट टाढै रहनुहोस् । लागूऔषध, मदिरा वा अन्य कुनै पनि प्रकारको कुलत भएका मानिसहरु चिनी वा
गुलियो बढी भएका जंक फुड, प्यास्ट्रिज, मिठाई वा डेर्जटका पारखी हुन्छन् । उनीहरुमा चिनी मोह हुुनुमा एउटा कारण छ ।चिनीले दिमागमा उत्पादन हुने डोपामाइन नामक न्युरोट्रान्समिटरलाई बाहिर निकालिदिन्छ, जसले गर्दा चिनीप्रति
उनीहरुको मोह बढ्छ । लागूऔषध प्रयोगकर्ताले जति चिनी खान्छन्, त्यति नै उनीहरुको दिमागबाट डोपामाइन बाहिर निस्कासन भइरहेको हुन्छ र सदाबहार सन्की मुडमा रहन्छन् । स्मरण होस्, डापामाइनले मानिसलाई बढी खुसी बनाउँछ ।
अनावश्यक भोक बढाउँछ
बिहानको वा मध्य साँझको भोक मेट्न तपाईंले रसबरी, प्यास्ट्रिज वा अन्य गुलिया चिज खानुभएको छ भने जति ढिलो खाना खाने योजना बनाए पनि झन् छिटो भोक लाग्छ । यस्ता चिज खाएर १० मिनेट दौडेर क्यालोरी घटाउँछु भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईंको गलत सोच हो ।
चिनीले कलेजोलाई बिगारिदिन्छ
तर फलफूल, मह, चकलेटमा प्रशस्त फ्रुक्टोज हुन्छ, जुन हाम्रो शरीरको रक्त नलीमा प्रवाहित हुन्छ ।फ्रक्टोजलाई कलेजोले मात्र अर्गानिक परिवर्तन गरिदिन्छ र शरीरलाई भविष्यमा आवश्यक पर्ने ऊर्जाका लागि ग्लुकोजमा परिवर्तन गरी भण्डारण गर्छ ।
विभिन्न प्रकारका क्यान्सर
अधिक चिनीको मात्रा क्यान्सरको एउटा संकेत हो । स्मरण होस्, शरीरको कोषको वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न इन्सुलिनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । उच्च गुलियो परिकारबाट उत्पन्न र संग्रहित इन्सुलिनले प्रोस्टेट, पेट र छातीको क्यान्सर हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।
इन्सुलिनको मात्रा बढ्छ
दाँतका लागि हानिकारक
चिनी तपाईंको दाँतका लागि हानिकारक हुनुको साथै दाँत तथा गिजामा हुने रोगको प्रमुख कारण हो । चिनी कसरी दाँतको शत्रु हो भन्ने विषयमा तपाईंलाई कौतूहल हुन सक्छ ।
हुन त चिनी क्यालोरीशून्य हुन्छ तर यसले खानेकुराबाट प्राप्त पोषणलाई सोसिदिन्छ । तसर्थ गुलियो चिज खाएपछि दाँत माँझ्नु भएन भने मुखमा भएको सुगरले मुखभित्र ब्याक्टेरिया उत्पन्न हुन र हुर्कन सहयोग पुर्याउँछ ।
चिनीले तपाईंलाई बूढो देखाउँछ
Prevमाई सेकेण्ड टिचरद्वारा क्रिकेट टिम र खेलाडीलाई पुरस्कार प्रदान
Nextभोलिका लागि बोलाइएको एमालेको बैठक ‘गुटको बैठक’ हो : नेतृ झाँक्री
गण्डकी प्रदेशमा अस्थायी मन्त्रिमण्डल बिस्तार, मनाङ्गेले लिन चाहेनन् खेलकुद मन्त्रालय
अक्षय कुमारको ‘रक्षा बन्धन’को सुटिङ सुरु
रु. ७ करोड लगानीमा पशुपति क्षेत्रभित्र राममन्दिर निर्माण हुने